192.168.8.1 - Uluhlu lwabamnyama / iBhlokhi yeWiFi yaBasebenzisi
Uluhlu lwabamnyama / iBlock Abasebenzisi be-WiFi-Ngaphandle kokukhuseleka ngothotho lwealfabhethi okanye iileta okanye zombini, kunokwenzeka ukuba njengesithethi singene kwiofisi yakho okanye kwinethiwekhi yasekhaya yeWiFi. Ngaba umntu ongaqhelekanga ngembotyi, odlulayo okanye ummelwane wakho, kodwa nokuba ngubani, kubalulekile ukwazi ukuba ungayifumana njani xa igajethi engekho mthethweni okanye engaziwayo ixhunywe kwinethiwekhi yakho ye-Wi-Fi kwaye ekugqibeleni, unciphise ukungena kwabo kwaye ubathintele.
Kwaye xa utshintsha iphasiwedi yendlela yakho yeyona ndlela yokuthintela ukufikelela kwidijethi engaziwayo, iyadinisa kwaye ikhuphe imveliso. Ngokuqinisekileyo akukho siqinisekiso sokuba istalker asiyi 'kutyhoboza' iphasiwedi kunye nokufumana kwakhona ukungena kwinethiwekhi yakho.
Apha ngezantsi kudwelisiwe zimbalwa iindlela ezinokuthenjwa zokufumana & ibhloko umntu okanye igajethi kwinethiwekhi yakho ye-Wi-Fi ngaphandle kokutshintsha iphasiwedi yomzila wakho.
1. Ukucoca idilesi ye-MAC engenazingcingo
Ukucoca iMAC kunceda ukuVimba abasebenzisi beWiFi izixhobo ezingagunyaziswanga ukunxibelelana neWi-Fi yakho, inethiwekhi Idilesi yeMAC yinombolo yesazisi (yehardware) efumana zonke izixhobo kwinethiwekhi. Idilesi ye-MAC iveliswa kwikhadi ngalinye lenethiwekhi kwaye akukho zi-2gadget kwihlabathi elinokuba nedilesi efanayo ye-MAC.
Ke ngokusebenzisa isixhobo sedilesi ye-MAC, unokuhlala u-odola ngokuzenzekelayo umzila wakho ukuvumela okanye ukwala ukungena kweso sixhobo kwinethiwekhi.
Ukwenza oku, ngena kwipaneli yolawulo lokungena kwindawo yolawulo
Ngaphantsi kwecandelo le-WLAN okanye elingenazingcingo kwikhonsoli, kuya kufuneka ujonge ukhetho lokucoca lweMAC.
Ukuba ayisebenzi, lungisa imeko yokucoca ye-MAC iye 'kuvunyelwe'
Emva koko yongeza izixhobo kuluhlu lwakho lwe-MAC Idilesi kwaye ukhethe ukuba unqwenela ukurhoxisa okanye uvumele ukungena kwabo kwinethiwekhi yomzila wakho.
2. Uluhlu oluMnyama ngqo
Zimbalwa ii-routers ze-WiFi ezivumela abathengi ukuba bavimbe izixhobo ezingaziwayo ngokudibanisa kuLuhlu oluMnyama ngokutyhala isitshixo. Oku kwahlukile kunye neempawu zendlela kodwa unokuhlala ukongeza izixhobo kuLuhlu oluMnyama lomzila wakho ngaphantsi kwecandelo 'uLawulo lwesiXhobo' kwindawo yakho yokufikelela kwikhonsoli / ipaneli yokulawula okanye leliphi na icandelo elinoluhlu lwazo zonke izixhobo ezinxulunyaniswe nomzila wakho. Apho uyakufumana "ibhloko" yesitshixo somthengi okanye into efanayo.
3. IiFowuni zokusebenza
Ukuba ujonge indlela efihlakeleyo nelula yoku vimba izixhobo ezingaziwayo Ukusuka kwinethiwekhi yakho ye-WiFi, kukho izixhobo zomnatha wesithathu ezifanelekileyo onokuqhagamshela kwisixhobo sakho endaweni yokungena kwipaneli yokulawula yendlela. Umzekelo FING, iyafikeleleka kwizixhobo ze-iOS kunye ne-Android kwaye ikunika ukhetho lokukhetha ukhetho lokuvumela abasebenzisi ukuba:
Vimba i-stalkers kunye nezixhobo ezingaziwayo, nokuba ngaphambili bezinxibelelana nenethiwekhi yakho
Ukuthumela izilumkiso ukuba isixhobo esitsha kwinethiwekhi yakho; ukuqaphela nje abangeneleli
Jonga uluhlu lwezixhobo ezahlukileyo / zenethiwekhi
Fumana ukufunyanwa kwesixhobo esifanelekileyo sedilesi ye-IP, imodeli, idilesi ye-MAC, igama lesixhobo, umthengisi kunye nomvelisi.
Fumana izilumkiso zesixhobo kunye nokhuseleko lwenethiwekhi kwi-imeyile yakho nakwifowuni
Kungakhathaliseki ukuba igajethi idibene njani nenethiwekhi ye-WiFi, ungabathintela ngazo naziphi na ezi ndlela zintathu zingasentla ngaphandle kokutshintsha igama eligqithisiweyo.
iindidi Uluhlu lweintanethi Post yokukhangela